mayelana ICO: Ubani eqoqwe izimali kakhulu phakathi yokuthengisa ithokheni - Blockchain Izindaba
Ngonyaka odlule, ICO kwaba yindlela ethandwa kakhulu ukhulisa izimali. Kodwa ochwepheshe aveze ukuthi sizobona indlela ehlukile ngokuphelele kokuqhuba yokuthengisa olunikezwa 2018. Manje ake ukhumbule okuyinto amaphrojekthi eqoqwe izimali kakhulu ngesikhathi ICO-ngezinye izikhathi, emizuzwaneni embalwa.
EOS – Kwengqalasizinda Onamandla Kunayo for Izicelo endlalekile
Ngaphezu kwe $700 abayizigidi ezingu eqoqwe. ICO usaqhubeka
EOS iyi-platform endlalekile konjiniyela kwezicelo endlalekile. UMdali EOS Dan Larimer. Waziwa nangokuthi njengoba umsunguli BitShares, Steem, futhi BitUSD.
Kuyaphawuleka ukuthi onjiniyela wanquma ukuqhuba okwandisa imali uJuni 2, 2018. Kuyinto isikhathi esiningi emisebenzini enjengalowo. Ekupheleni kuka-October, ngesikhathi Launch Scale 2017 inkomfa Brock Pearce wawuthi ICO EOS BakaJehova base bakhangwa cishe $700 million ngo 345 izinsuku, futhi kwakungeyona umkhawulo. Ngokusho Pearce, lokhu ICO bazohlangana ezingaphezu kuka $1 bhiliyoni ngaphambi kokuba aqede.
Isiteji esebenze blockchain ngefomethi yesistimu yokusebenza konjiniyela. Umgomo oyinhloko ukwenza ngcono ukusebenza kahle kolwazi nobuchwepheshe (zingeqedwe ekupheleleni, futhi amakhono izinhlelo ezifana anqunyelwe kuphela Komuntu) futhi ukuxazulula inkinga scalability blockchain ngokwandisa inani abasebenzisi izigidi futhi ijubane ukuthengiselana izigidi ngomzuzwana ngokusebenzisa izibalo parallel nokucubungula idatha. Lezi imibono umxhwele. Ukusebenza kwenethiwekhi uzobe kuqinisekiswa DPoS (Ubufakazi Abathunyelwe ka Esigxotsheni). Leyo, kubalulekile ukugcina wallet yakho namanye zemali sonke isikhathi ukuthengiselana avele blockchain. Isibalo ukhonkolo ayikwazi enikeziwe okwamanje, kodwa njengoba ihlaziye isimiso POS yezimayini, kuba sobala ukuthi izinhlamvu zemali ngaphezulu kukhona onawo, amathuba ngaphezulu une ukuthola block. Le ndlela ibizwa kahle kunobufakazi ngesikhathi yokuxhumana Steemit, lapho isikhathi isilinganiso ukuba uqinisekise lokho okwenziwe kuyinto ambalwa.
FileCoin – A endlalekile Market Data Isitoreji
$257 abayizigidi ezingu eqoqwe
FileCoin inethiwekhi endlalekile ku blockchain ayo isitoreji idatha kanye processing. Isimiso kwenethiwekhi imisebenzi ongaqhathaniswa yezimayini; umehluko nje ukuthi inkundla yezimayini. Abasebenzisi ukunikeza ukufinyeeleka kusitoreji yabo esenana FileCoins.
Kunezindlela ezimbili usebenzisa inethiwekhi kukhona:
Amaklayenti ukuthenga isitoreji ifu noma ucele ulwazi olufanele abasebenza emayini e enethiwekhi ukukhokhela amasevisi nge FileCoins.
Abavukuzi ukunikeza abasebenzisi nge ukufinyeeleka kusitoreji kwabo FileCoins.
FileCoin has izimbangi ezifana Storj futhi Sia. Le phrojekthi yokuqala kusekelwe Ethereum futhi has izinkinga nge scalability, kanti owesibili ngempela kancane kanye. FileCoin isebenzisa inethiwekhi yayo siqu futhi Izivumelwano basebenzisane abasebenzisi nedatha yawo.
Tezos – Esisha Digital Commonwealth
$232 abayizigidi ezingu eqoqwe
Tezos kuyinto endlalekile self-ephethwe uhlelo olusha blockchain ukuthi kudala umphakathi bangempela digital. Ubuchwepheshe kusiza yokuqinisekisa esisemthethweni, okuyinto izibalo kufakazela ngokunemba imisebenzi ikhodi zokulawula futhi kukhulisa nokuvikeleka obucayi kakhulu noma ngokwezimali kwesamba izinkontileka smart.
Ngamanye amazwi, Onjiniyela ukwethula esikhundleni Ethereum futhi ukumemezela ukukhululwa olandelwayo entsha ezikhethekile ukusebenza okuphephile izinkontileka smart. Uhlelo kuhloswe ekufezeni imisebenzi eyisisekelo, ezifana obala, ukuvikeleka, nesivinini umsebenzi. Ulimi siqu izivumelwano smart, ngokuthi Michelson, inikeza lwebulungisa yokuqinisekisa ngaphansi isimiso ukuthi isetshenziswa embonini zezindiza.
Naphezu ICO yimpumelelo ezifana, iphrojekthi namanje ekuqaleni sokuthuthuka ngenxa ezinye kudideka okungaphakathi. Abasunguli be-inkampani sezilufundile nilwe umongameli Isikhwama Swiss, ehlinzekela okwandisa imali, kanye zimali Namanje elinde amathokheni wawo. Nakuba labo usakwazi ukubekezela kakhulu kakade bafaka kumangala izincwadi eziningana ezimelene iphrojekthi.
Bancor – Endlalekile zezimali Network
$150 abayizigidi ezingu eqoqwe
Bancor inethiwekhi endlalekile elikuvumela ukuba sigcine Ethereum amathokheni futhi kalula ukuguqula kubo nanoma iziphi ezinye amathokheni ngaphandle besithathu ngesikhathi intengo ibalwa ngokuzenzakalelayo usebentisa web isikhwama esilula.
Ngesisekelo phrojekthi izinkontileka smart kanye prototype ngcono inethiwekhi Ethereum ukuthi kushintshe amathokheni ngokudlula cryptocurrency Ukuhwebelana. Kuyinto fast, okuthembekile, futhi, ukuthi yini ebaluleke kakhulu, ephephile. Ukuthengiselana zenziwa ngosizo izinkontileka smart. “Magic itholakala izibalo kanye ifomula elula ukuthi lithenge futhi uthengisa ngendlela yokuthi ibe yimali njalo emakethe inakekelwa kungakhathaliseki imiqulu nencwadi exchange Ukufakwa ohlwini,” Onjiniyela ukuchaza.
Okwafezwa inkampani zingaphezu 50 amaphrojekthi ithokheni, kuhlanganise Amandla Ledger, wax Token, UMUZWA, nabanye. Sebevele wajoyina inethiwekhi Bancor. amaphrojekthi umlingani Nine kakade isebenze amathokheni wawo futhi ungakwazi ukuthenga futhi adayise nabo ngokusebenzisa Bancor isicelo. Ngaphandle bnt (Bancor Network Token), isicelo isekela Eth, GNO, ENJ, BMC, IND, STX, ufisa, futhi IQT. Ngosizo izinkontileka smart, inethiwekhi iguqulwe 20.7 abayizigidi ezingu bnt ($58 abayizigidi ezingu ngesilinganiso isilinganiso Bancor).
Isimo – I Ethereum Iselula ye-OS
$100 abayizigidi ezingu eqoqwe
Kuyinto isimo semvelo entsha ngokuphelele kwezicelo endlalekile (DApps), enikeza abasebenzisi nge esisizayo ngoba uxhumana uhlelo kanye nabanye abasebenzisi yesikhulumi. Ngaphezu kwalokho, uhlelo ingakwazi ukufeza imisebenzi yesikhungo isikhwama, isiphequluli, futhi ingxoxo. Lonke Inqubo endlalekile futhi, Ngakho-ke, ephephile fast.
Kuyathakazelisa ukuthi abathuthukisi ukubhejela umphakathi ekuthuthukiseni iphrojekthi. Leyo, Onjiniyela ukunikeza ithuba umnikazi amathokheni emphakathini babambe iqhaza ekuthathweni kwezinqumo ekuthuthukiseni iphrojekthi naphezu kweqiniso lokuthi isimiso ICO kusho ukungabi amalungelo anjalo.
izicelo eziningana endlalekile sezivele ebhaliswe Isimo, kuhlanganise Gnosis Aragon.
Gnosis (250,000 Eth eqoqwe) is a platform endlalekile yokuqagela. Ngokwesibonelo, izibikezelo kungenziwa okuhloswe ngaso ukuxoxa nabantu abadumile, izingxoxo lesibonwa, pre-endalini uhlu imisebenzi yobuciko, ukubhejela ezemidlalo, njll.
TenX – Guqula bese Chitha Zezimali Virtual. Noma kunini. Nomakuphi
$83,1 abayizigidi ezingu eqoqwe
Inkampani Singapore yokukhokha izama ukwenza ukusetshenziswa cryptocurrencies njengoba elula futhi kulula njengoba ukusetshenziswa Fiat zezimali. Ngakho, base bamukela-ke imvume Visa kanye MasterCard futhi wakhipha ikhadi yabo plastic. Izindleko lokukhipha ikhadi $15, kodwa ungakwazi oda inguqulo yayo virtual kwi website esemthethweni kanye. Le nkampani uthembisa ongaphakeme ikhomishini izimali ngokusebenzisa isevisi uma izindleko ekhadini angaphansi kuka $1,000 ngonyaka. Uma izindleko ekhadini idlula alolu, izimali ikhomishana ngeke ukhokhiswe.
Namuhla, uhlelo lusebenza nge bitcoin, kuyilapho i-ether kanye dash ku avaliwe beta mode. Ukusekelwa ERC20 amathokheni standard wabuye wathi, okusho ukuhambisana DGX, Rep, THEMBELA, NEO, nabanye. Kuyini ezithakazelisayo kakhulu ukuthi ungakwazi ukukhokha ngekhadi TenX nganoma iyiphi esitolo ukuthi wamukela Visa kanye MasterCard. Kuyinto iphrojekthi ethembisa kakhulu kusekelwa Vitalik Buterin.
$33 abayizigidi ezingu eqoqwe
Civic ihlose ukwakha isimo semvelo jikelele enikeza ukufinyelela ulwazi olufanele on funa. okungukuthi, ke enikeza ukufinyelela kumasevisi zokuqinisekisa ngokusebenzisa blockchain. Ngakho, Civic ngeke ukunikeza ukufinyelela elula nephephile idatha yomuntu siqu abasebenzisi 'futhi siqinisekise ubuwena zabo.
Ngokwesibonelo, inkampani inikeza izakhamuzi zaseMpumalanga Ekude ukubamba iqhaza draw imoto, okuyinto izobanjelwa kuphela ngabo. Uma umgqugquzeli ibambisane Civic, bakwazi ukuhlola ukuthi bonke abahlanganyeli izakhamuzi le ngxenye yezwe.
Civic kakade ukhiphe isicelo platform yayo digital ukuhlonza, eyaziwa ngokuthi i-Civic Secure Identity Ipulatifomu (Inguqulo ye-iOS kuphela).
Aventus – B2B ithikithi Ingqalasizinda
$18.7 abayizigidi ezingu eqoqwe
Aventus iyithuluzi ukudala futhi ukukhuthaza amathikithi for imicimbi ehlukahlukene ngendlela ephephile futhi esobala. Abagqugquzeli umcimbi ngokwabo ukulawula amathikithi ukusatshalaliswa.
Le phrojekthi evumela ukuba uhlaziye isimiso ithikithi ukusatshalaliswa ezimakethe yesibili kanye ukuqeda ukukhangisa angahlelekile nemisebenzi engekho emthethweni eziphathelene nokuthengiswa kwamathikithi. Nge ithuluzi ezifana, abagqugquzeli uzokwazi ukusetha ubuncane namanani esiphezulu amathikithi futhi ukuqapha ukuhamba yabo emakethe yesibili, okwenza yonke le nqubo esobala futhi engenzeleli.
Ngamanye amazwi, kuba uhlelo ithikithi ephephile. Umsebenzi oyinhloko Aventus ukushintsha umqondo ithikithi ukusatshalaliswa futhi kwenze kube usabalalise, esizovumela abagqugquzeli kanye nezinhlelo ezikhethekile ukudayisa amathikithi for imicimbi ngokuzenzekelayo futhi uthole ikhomishini ke.
Manje sizokwenza uyinaka yimpumelelo Russian ICO imisebenzi eminingana.
$53 abayizigidi ezingu eqoqwe
Broadband Ukufinyelela i-Inthanethi useshintshe ezweni imidlalo. imikhankaso abangabodwa boring, nabadlali ufuna bancintisane ngesikhathi sangempela. Ubuciko blockchain uzokwenza izinguquko amageyimu yabadlali abaningi: manje cybersport imincintiswano izotholakala wonke umuntu. Lokhu isivele ikhona nge-smart ithokheni MobileGo, esizovumela amamiliyoni wabadlali ezivela emhlabeni wonke bahlangane tournaments endlalekile futhi P2P olufana.
Ukuyibeka ngqo, Onjiniyela bafuna ukwandisa imingcele izenzakalo e-ezemidlalo, esizovumela ukuba bonke abadlali iqhaza imincintiswano ngemibandela alinganayo. Abadlali uzobe umvuzo impumelelo ethile nge cash imiklomelo.
Russian Imayini Centre – Imayini ezinamangqamuzana amaningi
$43 abayizigidi ezingu eqoqwe
I-Russian inkampani ephethe eqala izikhungo izimayini eRussia, ithuthukisa abavukuzi eliyingqayizivele futhi eziphambili kakhulu, ngokuthi Multiclet, futhi ukhiqiza abavukuzi Sunrise.
The main intuthuko umqondo saloluhlelo ukudala i "ASIC ukumelana" emayini ukuthi uyokumba a cryptocurrency, Ngokwesibonelo, Ethereum, izikhathi eziningana kalula kakhulu kunezimoto ezivamile ihluzo amakhadi bese usebenzisa ayimbijana amandla. izinkomba ezinjalo kuhlelwe ukuba kufinyelelwe ngokuthuthukisa processor ezinamangqamuzana amaningi, okuzokwenziwa esekelwe isimiso esifanayo kumakhompyutha asakazwa chip ihluzo ikhadi.
Namuhla, inkampani onika Sunrise ASICs nge Bitfury angaphandle chips. Ukuthuthukiswa yasekhaya Computing processor kuzothatha cishe ngonyaka. Le phrojekthi kungase kubhekwe njengokuvamile inguquko Russian ezimayini.
ins Ecosystem – I sokudla Imboni, reinvented
$42.1 abayizigidi ezingu eqoqwe
Lokhu uqalisa iyona global ecosystem lokuqala endlalekile exhumanisa abakhiqizi ukudla abathengi ngqo.
Inhloso ukuthi abathengi kungaba uxhumane nomkhiqizi ngqo, ngokudlula abathengisi kanye nezinye abaxhumanisi ukuthi ayikwazi ukulawulwa ngokugcwele. Izitolo ngokuvamile bawasebenzisa amandla emakethe yabo: bona ngaphezu kwentengo namanani nokucindezela abahwebi amancane. It kuyinkinga evamile zingaxazululwa nge ins Ecosystem.
$42 abayizigidi ezingu eqoqwe
Le phrojekthi simele nomqondo supercomputer endlalekile global inkungu Computing. I endlalekile yesistimu yokusebenza emsamo Ethereum unesibopho ukuqaliswa Computing imisebenzi namakhono. Lolu hlelo ucezu ezikhethekile software ezingaba ukuhlanganisa ezinkulungwane noma ngisho ezigidi lwamakhompyutha emhlabeni wonke ku kunethiwekhi eyodwa ikhompyutha. Lokhu kuzokwenza ungakwazi ukuthwebula Imiphumela irekhodi-breaking kunoma yimuphi ikhompyutha nokuba yinkimbinkimbi, kungakhathaliseki ukuthi ekubaleni inani molecule e ucezu DNA kwezokwelapha, noma becwaninga isikhala okude, noma ngifuna uhlobo olusha eziphilayo emhlabeni kanye nezinye amaplanethi.
Izimali eziningi phakathi yokuthengisa ithokheni
Thumela Previous:Ngeke kanjani ICO Market ukushintsha e 2018?
Thumela Landelayo:Blockchain Izindaba 8 Januwari 2018